Dhaqaalaha Ghostwriter I Waxaan kuu qori doonaa waraaqahaaga
Darajada dhaqaalaha waa isku dhafka maamulka ganacsiga (BWL) iyo dhaqaalaha (VWL). Barashada dhaqaalaha waxay suurtogal ka dhigeysaa in la fahmo nolosha dhaqaale marka la eego duruufaha dhaqaale iyo in la bilaabo cawaaqib ku wajahan habka ganacsiga. Meelo badan oo maadooyin badan oo kala duwan ayaa sidoo kale lagu baraa koorsadan.
Maamulka Guud ee Ganacsiga (BWL)
Maamulka / maamulka shirkadaha
Iibka / Qaybinta
Dhaqaalaha Guud (Dhaqaalaha)
Waxay kuxirantahay danaha, koorsadu waxay diirada saareysaa: maamulka shirkadaha, maareynta mashruuca, soo bandhigida iyo tababarka isgaarsiinta. Dabcan, waxaa loo maleynayaa in ugu yaraan hal luuqad shisheeye - guud ahaan Ingiriis - lagu hadlo laguna qoro. Leyliintu sidoo kale waa arrin dabcan inta lagu jiro waxbarashadaada. Qorayaasheena dhaqaalaha ayaa kaa caawin kara mowduucyo kala duwan. Caawimaaddeennu waxay ku saabsan tahay abuurista shaqo aad adigu leedahay shahaadada bachelor, shahaadada Masterka midigta ilaa Maqalka. Waan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno Shaqada guriga, qiimeynta tirakoobka iyo Falanqaynta xogta. Waxaan sidoo kale kuu soo bandhigeynaa mid Qorshaha ganacsiga ama in laguu abuuro wax aan la taaban karin si aad u muujiso tusaalooyin yar oo suurtagal ah. Dabcan sidoo kale waxaan kaa caawin karnaa xirfadle Akhrinta taageero. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Waxaan kuu ballan qaadaynaa:
Dabcan waxaad heli doontaa baaritaanka xatooyada!
Noo soo dir aan qasab ahayn baaritaan - toos baan kuu caawinaynaa!
Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor. Qoraa-yahankeena ghostwriter ayaa kuu soo diri doona shaqo adiga. Adeegsiga adeeggan oo kale ayaa kaa caawin doona. Tayada shaqadaada, waa inaad sidoo kale ku tiirsanaataa mid ka mid ah qorayaashayada qoraalkaaga.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Waan ku faraxsanaan lahayn inaan kaala talino tan Akhrinta. Markaad qalin jabiso waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu awoodid sayniska sayniska sii wad inaad xirfad yeelato awoodo. Shaqadaada cilmiga ah ee sidaas ah shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga.
Qoraalka shahaadada ee dhaqaalaha / maamulka ganacsiga
Shahaadadaada dhaqaalaha waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu caansan ardayda waxaana laga bixiyaa ku dhowaad jaamacad kasta ama kulleej kasta. Arday ahaan, waa inaad ka soo dhex baxdaa ardaydaada kale adigoo u maraya waxqabad tacliineed oo heer sare ah. Sidan oo kale, waxaad ku bilaabi kartaa noloshaada xirfadeed rajo leh dhamaadka waxbarashadaada. Tartanka ardayda qalin jabisay waa mid aad u xoogan, gaar ahaan maadaama ardayda maamulka ganacsiga ay leeyihiin xirfado isku mid ah. Inta badan macaamiisheenu waxay kaloo yiraahdaan tani waa sababta ay noogu baahan yihiin. Ardayda kale ee dhigata waxay rabaan inay ka soo dhex baxaan celceliska ardayga oo ay ka aaminaan mustaqbalkooda mustaqbal mustaqbal leh waxqabad tacliimeed oo aad u wanaagsan. Dhaqaalaha waa maado si aad ah loogu baahan yahay. Iyadoo la raacayo, xulashada qorayaashayadu sidoo kale way ku weyn yihiin halkan. Waxay daboolayaan qaybo badan oo waxbarasho ah.
Dhaqaalaha / Maamulka Ganacsiga ee Cilmi baarista
Ardaydu waxay xor u yihiin inay aadaan sayniska qalin jabinta ka dib si ay u joogaan oo ay u sameeyaan shahaadada PhD Mawduucyada cilmi baarista qaarkood waxay aad ugu dhow yihiin maamulka ganacsiga iyo Dhaqaalaha. Qoraal-gacmeedku wuxuu kaloo ka caawiyaa tan. At shaqada tacliinta dabcan waan caawin doonaa!
Rajada xirfadeed ee shahaadada dhaqaalaha / maamulka ganacsiga
Markaad waxbarato waxaad fursad u leedahay shaqooyin badan oo mushahar fiican qaata. Dhaqaaleyahan ahaan, fursadahaaga shaqo ee shirkadaha guud ahaan waa kuwo aad u wanaagsan. Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed. Noo soo dir baaritaan ama is qor telefoon ahaansi aad toos ugu heli karto dalab!
Dhaqaalaha dhinaca maaraynta shaqaalaha
Maamulka shaqaalaha waxaa ku jira mowduucyo dhaqaale bandhigyo lagama maarmaan. Dhinacyada horumarinta shaqaalaha, maamulka shaqaalaha iyo meeleynta shaqaalaha, waxaa jira mowduucyo kala duwan oo lagu taageerayo shaqaalaha. Markaad haysato Bachelor-ka ee Maareynta Kheyraadka Aadanaha si wanaagsan ayaad u diyaar garawday. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.